Daawo Sawirro: Wabbiga Shabelle oo mar kale biyo la’aan u noqday leexashadii Itoobiya ay samaysay xilli dalka ka jiraan abaaro ba’an! | kowtharmedia.com
Home WARAR Daawo Sawirro: Wabbiga Shabelle oo mar kale biyo la’aan u noqday leexashadii Itoobiya ay samaysay xilli dalka ka jiraan abaaro ba’an!
Daawo Sawirro: Wabbiga Shabelle oo mar kale biyo la’aan u noqday leexashadii Itoobiya ay samaysay xilli dalka ka jiraan abaaro ba’an!
Webiga Shabelle oo ka mid ah labada webi ee mara dalkeena Soomaaliya ayaa mar kale waxaa soo wajahay xaalad adag ka dib markii ay ka gureen biyihii.
Meelaha qaar webiga ayaa la sheegayaa in lagu arkayo biyo aad u yar oo aan dhaafsiisneyn cagaha hoostooda.
Weriye ku sugan magaalada B/weyne ayaa warbaahinta u sheegay in webiga Shabelle ee magaaladaas dhexmara lagu arkayo biyo aad u hooseeya oo xitaa aan laheyn awood ay ku socdaan.
Magaalada Jowhar dadka ku sugan waxay sheegayaan in webigu uusan wax biyo laheyn dhexdiisana ay ku ciyaaraan caruurta, waxaana melaha qaar ka muuqanaya biyo aan macno laheyn.
Degmada Afgooye wararka ka imanaya iyana waxay sheegayaan in webigu uuba qalalay wax biyo ahna aysan jirin.
Beeraleyda ku tiirsanaa biyaha webigan ayaa la sheegayaa iney soo food saartay xaalad adag iyo walaac ku saabsan in beerahooda ay ka waraab la’aan u baaba’aan.
Sanadkii hore ayey aheyd markii sidan oo kale uu guray webiga Shabelle, isagoo biyo la’aan ahaa muddo saddex bilood ah.
Dhulka Soomaalida Ogaadeen ee Itooobiya xooga uga haysato Maamulkaas Itoobiya ayaa ka jeexday Kanaalo waaweyn sanadkii hore degaanada hoos taga Gumaysiga Tigray ayaa loo aaneynayaa in ee biyo xareen samaysten marka webigu biyo yareeyo aysan biyihiisu soo gaarin gudaha Dalkayna Soomaaliya Yaasiinta Soomaalida umatasha Maamulka ayaa hada waxay wadda yihiin kuwoo kuwada Nool Gumaysiga Itoobi Tigray.
Biyo la’aanta webiga Shabelle ayaa ku soo aadeysa xili dalka qeybo badan oo ka mid ah ay ka jiraan abaaro ba’an ka dib markii roobabki deyrta ay yaraadeen.
Xaalada abaarta ayaa laga cabsi qabaa iney ka sii darto maadaama la guda galayo bisha soo socota xiliga jiilaalka oo ah xiliga ugu kuleylka iyo roob la’aanta badan Somalia sanad kasta, wax roob ahna lama fili karo ka hor xiliga Gu’ga oo bilabaanaya bilaha Abriil ama May ee sanadkan.
F.G: Sawiradan hoose waa kuwii ugu dambeyeey ee laga soo qaaday webiga Shabelle gaar ahaan degmooyinka Afgooye iyo Jowhar.
Previous PostXildhibaano mooshin cusub ka diyaarinaya madaxweynaha Koofur Galbeed Shariifo Xasan!! Next PostDaawo: Saldhiga Imaaraadku doonayo Inuu ku yeesho BER-BERA iyo Halista Ka dhalan doonta oo lasoo Bandhigay MUUQAAL!!